ရုရှားနိုင်ငံအကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဂျပန်လူမျိုး - JAPO Japanese News
ဂါ 11 Jun 2019, 18:45 ညနေ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၆၀ လောက်ကနေ ဆာမူရိုင်းခေတ်ကြီး စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီခေတ်ကို နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ တိုင်တိုင် အဲဒိုခေတ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီခေတ် အာရှနိုင်ငံတွေကို ဥရောပ နဲ့ အမေရိကန်စတဲ့နိုင်ငံတွေက သင်္ဘောနဲ့အသွားအလာလုပ်ကြပြီး နယ်ချဲ့မှုတွေစတင်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာရေးလုပ်ရှားမှုတွေ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး သေနပ်တွေနဲ့ခြောက်လန့်ပြီး လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကိုကြောက်တဲ့ ဂျပန်တွေက တိုင်းပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ အားလုံးကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုယ်ပိုင်စနစ်နဲ့ ရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ဒေသတွေမှာတော့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီဒေသတွေကနေဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်ရဲ့လူနေမှုဘဝနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ခေတ်လည်းရှိပါတယ်။
ဒီလိုကိစ္စတွေကြားထဲမှာ ရုရှားနိုင်ငံဟာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက် တောင်းဆိုမှုတွေကို ဟိုကိုင်းဒိုးမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲရောက်လာလာ လူဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရုရှားနိုင်ငံက တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ 択捉島（えとろふとう）အဲတိုရိုဖုတိုးနဲ့樺太（からふと）ခရဖုတို မြို့တွေကို တိုက်ခိုက်ရယူ သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကလည်း အပြန်အလှန်ငြင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဒါကိုပစ်မှတ်ထားပြီး ပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို သင်္ဘောနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ရုရှားလူမျိုးတွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံကို ပြန်ပြေးသွားတဲ့နိုင်ငံသားတွေက တိုင်းပြည်ကိုပြန်တင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ ပြဿနာအကြီးကြီးတက်ခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံဟာ တဖန်ပြန်လည်တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ခုနရှိရိကျွန်းရဲ့ အနီးနားက ဂျပန်သင်္ဘောကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အကျဥ်းချထားခဲ့ပါတယ်။
ခုနရှိရိကျွန်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရုရှားသင်္ဘောက ပိုင်နက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ဂျပန်လူမျိုးကို ဖမ်းဆီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။.
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖမ်းဆီခံခဲ့ရတဲ့တစ်ယောက်ဟာ ဒီတစ်ခေါက်မှာမိတ်ဆက်ပေးမယ့် 高田屋嘉兵衛（たかだや　きへい）တကဒယ ခိဟဲအိ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံကို ခေါ်သွားခဲ့တဲ့ တကဓယ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တစ်ယောက်မနေနဲ့ အရမ်းကိုကောင်းတဲ့အရာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးနက်ရှိုင်းပြီး အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ ရုရှားဘာသာစကားကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက ဂျပန်လူမျိုးတွေထဲမှာ ရုရှားဘာသာစကားတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိဘဲ ရုရှားနိုင်ငံကနေ တောင်းဆိုတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကိုသေသေချာချာနားမလည်ဘဲ ငြင်းပယ်မှုတွေကိုပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှု၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကို တိတိကျကျနားထောင်ပေးခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းမှုတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဖမ်းထားခဲ့တဲ့ ရုရှားလူမျိုးတွေကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်ပြန်လွတ်ခဲ့ရာ တကဒယ လည်းဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တကဒယ သာမရှိဘူးဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံကြားကဆက်ဆံရေးတွေဟာလည်း ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘဲ အမြဲတမ်းစစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာတောင်မှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာမှာ တကဒယ ရဲ့ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ အရမ်းကိုပြောင်မြောက်တဲ့ ရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်အရပြောရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘစစ်ကြီးအပြီးမှာ 、択捉島(えとろふとう) အဲဒိုဖုတိုး 、樺太(からふと) ခရဖုတို 、国後島(くなしりとう) ခုနရှိရိတိုး ဆိုတဲ့ကျွန်းတွေ အပါအဝင် ဟိုကိုင်းဒိုး အရှေ့ဘက်ကျွန်းတွေဟာ ရုရှားပိုင်မြေတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တကဒယရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေသာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် စစ်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေပြီး တစ်ချိန်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရုရှားလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးတွေ ဆက်ပြီးရှိနေမှာလုံးဝသေချာပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် တကဒယ ဟာ ယခုလက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံကို တည်ထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ် တကဒယဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်တဲ့အချိန် ဟိုကိုင်းဒိုးကျွန်းရဲ့ 函館（はこだて）ဟခိုဓတဲ့ မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီး 1818 ခုနှစ်မှာ မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ 淡路島（あわじしま）အဝဂျိကျွန်း ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
တကဒယ ရဲ့ကလေးဘဝမှာ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရပြီး အဝဂျိကျွန်းမှာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဝဂျိကျွန်းရဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားက အဝါရောင်ပန်းခင်က တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်။
သူက ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကိုဆောက်ပြီး အဝဂျိကျွန်းမှာရှိတဲ့ ကမ်းစပ်ရဲ့စီမံမှုနဲ့ မြစ်ရဲ့စီမံမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၈၂၇ ခုနှစ် အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ်ဆုံးပါးသွားတဲ့အထိ တခြားလူတွေ ဝင်ရောက်မှုပိတ်ပင်ထားမှု၊ လူတွေရဲ့စိတ်ကို နှိုးကြာစေးမှုနဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကျိုးပြုလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ စစ်ပွဲတွေ မပျောက်ကွယ်သေး
၁၈၉၄ ခုနှစ်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဗီဒီယို
ကိုဗစ်ကြောင့် ရေပန်းစားလာတဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်က? Amabie !!!!